Iindaba-IziThuba eziziSebenzisayo zeziGcigci ziSombulula njani iiNgxaki zamaShishini oMveliso woKutya?
Ingaba iSitora esiZisebenzelayo siSombulula njani Iingxaki zamaShishini oMveliso woKutya?
I-Nantong Jiazhiwei Food Co., Ltd. (emva koku kubhekiselwa kuyo njenge: Jiazhiwei), njengesiraphu (isixhobo seti yobisi ekrwada) umenzi, ibonelela ngemathiriyeli ekrwada kwiinkampani ezininzi zeti yobisi ezifana neGuming kunye neXiangtian.Umzi-mveliso usebenza 24*7, 365 iintsuku ngonyaka.Ngemveliso yonyaka yeetoni ze-200,000 zeemveliso zesiraphu, inyuke ngokukhawuleza kwaye kulindeleke ukuba iqhubeke nokugcina ukukhula ngokukhawuleza kwiminyaka emihlanu ezayo.
Jiazhiwei iingxaki zogcino lwemveli:
Iindleko zabasebenzi ziyenyuka kwaye nenani labasebenzi abakhoyo liyancipha
Ukusebenza kakuhle komsebenzi wezandla kuphantsi, kwaye kukho izinga elithile lempazamo
Iindleko zomhlaba zihlala ziphezulu
Ulawulo lwesitora seshishini kunye nolawulo lwemveliso aludityaniswanga ngokusondeleyo, nto leyo elula ukubangela ukusilela kuluhlu
Iqondo le-automation kunye ne-informatization i-laggard, kwaye kukho ukunqongophala kolawulo olusemgangathweni lwempahla.
Beka isiseko esiluqilima
-Vindawo ethe tyaba yeemitha ezingama-22.9
- Imigangatho eyi-9 kunye neendlela ezi-8
- Ezi-2 zi-stacker ezinzuluikhreyiniiinkqubo
- Ezi-6 zi-stacker ezinzulu kabiniikhreyiniiinkqubo
- I-15,160 izikhundla ze-pallet
Emva kohlalutyo olucokisekileyo, kwicandelo lolwakhiwo lwemveliso egqityiweyo yokugcina impahla, uJiazhiwei wagqiba ekubeni akhethe iROBOTECH yokwakha indawo yokugcina impahla ekhuselekileyo, ezinzileyo nethembekileyo.
Ukuze kuphuculwe izinga lokusetyenziswa kwendawo yokugcina impahla, iROBOTECHInkqubo ye-AS/RS isebenzisa ngokupheleleyo iindawo ethe nkqo yeemitha ezingama-22.9, kwaye yakha indawo yokugcina impahla ezenzekelayo ngeImigangatho eyi-9 kunye neendlela ezi-8ngayo.Phakathi kwabo,Ezi-2 zinzulu stackerikhreyiniiinkqubo, kwayeEzi-6 zinzulu kabini stackerikhreyiniiinkqubo, eyandisa kakhulu uluhlu lwempahla.Iyonke phantseI-15,160 izikhundla ze-palletiyakwazi ukuhlaliswa, kunye nomthamo wokugcina malunga namaxesha amathathu kunangaphambi kokulungiswa, okuhlangabezana nemfuno yeJiazhiwei yogcino oluphezulu.
Ngokumalunga nokusebenza ngokufanelekileyo, inkqubo ye-AS/RS ifezekisa oku kulandelayo:
1) Umjikelo wekhompawundi51 iipalethi/yureukuzila ukungena nangaphandle kwendawo yokugcina impahla;
2)160m/min isantya esiphezuluisantya sentshukumo ethe tyaba;
3) Ubuninzi bomthwalo1100kg/pallet.
Ugcino kunye nokuhanjiswa okukrelekrele yindlela yophuhliso loshishino lwemveliso yokutya.Inkqubo yokugcina indawo ye-AS / RS inokufezekisa "i-first-in, first-out" kunye "ne-inventory ezenzekelayo" ukuphepha ukuguga kwendalo kunye nokuwohloka kwempahla yokutya, kunye nokunciphisa ilahleko ebangelwa yimpahla eyonakeleyo okanye elahlekileyo.
I-NanJing Ulwazi lweZixhobo zokuGcina (iQela) Co.,Ltd
Imfonomfono: +86 13851666948
Idilesi: No. 470, Yinhua Street, Jiangning District, Nanjing Ctiy, China 211102
Ixesha lokuposa: Apr-26-2022
IShuttle yomntwana, ICarton Live, Qhuba kwi Racking, Asrs Ugcino, I-Four Way Shuttle, Umhambisi,